Neymar oo dalkiisa u soo saaray wareegga 8-da ee ciyaaraha adduunka+ SAWIRRO+VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Neymar oo dalkiisa u soo saaray wareegga 8-da ee ciyaaraha adduunka+ SAWIRRO+VIDEO
Laba gool oo ay kala dhaliyeen Neymar Jr iyo Roberto Firmino ayaa guul siiyay xulka Brazil kulankii ay la ciyaareen Mexico, waxeyna taasi u sahashay iney si fudud ku gaaraan wareega quarter final-ka koobka Adduunka.
Mexico oo soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah ayaa isaga hartay tartanka, waxeyna ku baxeen gacmaha xulka ugu guulaha badan tartanka kaas oo shan jeer horay u hantay hadana u hanqal-taagaya markii 6-aad.
Ciyaartoyda Mexico ayaa ku bilowday si aan laga filaneyn waxeyna durba qal-qal weyn galiyeen goolka Brazil, kubad geesta laga soo qaaday ayuu si jilcan u feerayo goolhaye Allison, balse kubadii kasoo baxday ee goolka la aadiyay Miranda ayaa isku dhigay.
FURSAD: Daqiiqadii 15-aad: Hirving Lozano ayaa si qurux badan usoo dhaafay Felipe Luis ka hor inta uusan qalqal galin goolka Brazil, balse uma suuragalin iney gool ku helaan.
Labaatankii daqiiqo ugu horeeya qof walba wuxuu filanayay in Mexico difaac gali doonto isla markaana kaliya gaadi doonto weerar rogaal celis ah, balse Brazil ayaa sidaas aheyd.
FURSAD: Daqiiqadii 27-aad: Carlos Vela ayaa si fiican kubad u koontoroolay ka hor inta uusan soo dhaafin Fagner, balse kubadii uu siiyay Hector Herrera waa ku fashilmay inuu goolka ku aadiyo.
FURSAD: Daqiiqadii 25-aad: Neymar Junior ayaa si fiican ugu gooyay laba difaac ka hor inta uusan goolhayaha hortagin, balse goolhaye Guillermo Ochoa ayaa si geesinimo leh uga badbaadiyay.
Qeybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala baxay barbaro gool la’aan ah iyadoo Mexico ay soo bandhigtay qaab ciyaareed aan laga filaneyn, waxeyna muujiyeen geesinimo.
Qeybtii labaad ayaa la isku soo laabtay iyadoo Brazil ay la timid waji ka duwan middii hore maadaama ay durba cadaadis ku bilaabeen goolka Mexico.
GOAL: Daqiiqadii 51-aad: Neymar ayaa shabaqa soo taabtay markii uu si fudud kubad ugu leexiyay shabaqa markii uu Willian si la jecleysto kubada usoo dhaafiyay daafacyada iyo goolhayaha Mexico, balse waxaa xusid mudan in Neymar si cirib dhiib ah ku abuuray kubadda marka hore.
BADBAADO: Daqiiqadii 58-aad: Pauinho ayaa si awood leh kubad ugu tuuray goolka markii uu kubad ka helay Fagner, balse kubadii uu goolka aadiyay Guillermo Ochoa ayaa badbaadiyay.
FURSAD: Daqiiqadii 61-aad: Ciyaartoyda Mexico ayaa abuuray kubad furan, balse Carlos Vela ayaa isku day adag sameeyay ka hor inta uu Allison Becker si halis ah isaga saarin.
BADBAADO: Daqiiqadii 63-aad: Willian ayaa si xarago leh ku dhaafay mid ka mid ah xidigaha Mexico ka hor inta uusan kubad holac ah ku tuurin goolka balse Guillermo Ochoa ayaa badbaadiyay.
FURSAD: Daqiiqadii 67-aad: Willian ayaa si xawaare leh weerar u abuuray, si fudud ayuu u siiyay Neymar balse kubadii uu goolka aadiyay oo halis noqon kartay waxaa isku dhigay oo koorne u saaray Carlos Salcedo.
FURSAD: Daqiiqadii 69-aad: Ciyaartoyda Mexico ayaa mar kale abuuray fursad, kubad dhinaca lasoo dhigay oo ay soo saareen daafaca Brazil waxaa si awood leh goosha ugu aadiyay Andres Guardado balse mar kale daafaca ayaa isku dhigay.
GOAL: Daqiiqadii 89-aad: Roberto Firmino ayaa shabaqa soo taabtay isagoo kaliya ku jira garoonka 4-daqiiqo, Neymar ayaa isku dayay inuu gool dhaliyo waxaa inyar ka beeniyay Ochoa balse Firmino ayaa si sahal ah kubadda goolka ugu taabtay.
Natiijada ciyaarta waxey ku dhamaatay 2-0, oo ay guusha ku raacday Brazil, xulka reer Koonfur America ayaana gaaray wareega quarter final-ka koobka Adduunka iyagoo sugi doona xulka xulkii soo baxa Japan iyo Belgium.